Somali, Tracts, GOOBTA 01 -- Ma taqaanaa Ciise? | Waters of Life
Home -- Somali -- Tracts -- Tract 01 (Do You Know Jesus?)
GOOBTA - Fariimaha gaaban ee Kitaabka Quduuska ah ee qaybinta
GOOBTA 1 -- Ma taqaanaa Ciise?
Qofkasta oo taariikhda taariikhda qora wuxuu heli karaa hoggaamiyayaal heer sare ah oo saameyn ku leh dhaqanka iyo quruxdooda. Hal qof oo kale waa Ciise, Wiilka Maryan. In ka badan saddex meelood meel dadka adduunka ayaa raacaya waxbarashadiisa. Magaca Ciise waa ereyga ugu muhiimsan Axdiga Cusub, oo ka muuqda 975 jeer buugaagta lix iyo labaatanka ah.
Malaa'igta Gabriel waxaa laga soo diray Ilaah Maryan oo bikrad ah. Oo malaa'igtii Rabbigu waxay u muuqatay Yuusuf oo ninkii reer Maryan u sheegay. Waxaa loo sheegay in wiilka uurka ku dhashay Maryan uu ahaa Ruuxa Quduuska ah, iyo in ay magaciisa ku magacawaan "Ciise, waayo wuu ka badbaadin doonaa dembiyadooda" (Matayos 1:20-23; Luukos 1:31).
Magacani maahan nin la sameeyey, laakiin wuxuu rabaa rabitaanka Ilaah. Magaca "Ciise", ayaa been sheega qorshaha Ilaah ee loogu talagalay badbaadinta aadanaha, qorshe ayaa horay loo qorsheeyay ka hor aasaaskii adduunka. Magaca Ciise waxa uu macnihiisu yahay, "Rabbigga axdiga wuu caawiyaa oo badbaadiyaa".
Ilaah wuxuu bedelay adduunka oo dhan isaga oo u maraya Ciise reer Naasareet. Wiilka Maryan muxuu macnihiisu yahay bini-aadannimada bini-aadannimada, mana samaynin mucjisooyin mucjisooyin ah, laakiin isaga oo adeegsanaya, Ilaah wuu hadlay oo wuu shaqeeyay (Yooxanaa 5:19-21; 14:10-24). Maxay ahayd ujeedkii uu ku yimid? Oo bal muxuu ruuxiisa ka heli doonaa?
Wuxuu naga furaa sharaf
Ciise wuxuu ku yidhi, "ii imanaya, dhammaantiin adoo shaqeeya oo culays culus, oo waxaan idin siin doonaa nasasho ... wax iga barto, waayo, waan qabaa, oo waan qaboobaa, qalbigayguna waa hooseeyaa" (Matayos 11:28-29). Dhamaan kuwa ku adagtahay inay xakameyaan noloshooda waxaa lagu dhiirigelinayaa inay Ciise u yimaadaan. Kii kasta oo yimaadaa, Ciise Masiix baa samatabbixi lahaa, oo wuxuu siin doonaa meel ammaan ah.
Ciise wuxuu yidhi, "Wiilka Aadanahu uma iman inuu u adeego, laakiinse inuu u adeego, oo uu naftiisa inuu dhinto madaxfurasho badan" (Matayos 20:28). Kuwa Ciise raacay waxa lagu daaweeyaa dabeecadda iyo farxad ahaanna u adeegaan kuwa kale xooggiisa.
Wuxuu ka soo bixiyaa cadhada Ilaah
Cadowga kan Quduuska ah wuxuu ku sugnaan doonaa dhammaan kuwa ku dembaabay, laakiin Ciise waxa uu rumaystayaasha isaga ka ilaalinayaa xukun kasta oo Maalinta Qiyaame (Yooxanaa 3:18; 5:24). Rabbigu run buu ugu soo jeestay nebiyadii Nebi Isayos, oo wuxuu yidhi, Sida runta ah wuxuu miyirkayaga ku soo bixin doonaa onkodkayga, wuuna xanuunsaday. laakiinse waxaynu ku tirinnay mid belaayo ku dhacday, oo Ilaah dilay, oo dhibaataysan. Laakiinse waxaa isaga loo dhaawacay xadgudubyadeenna, waxaana loo nabareeyey xumaatooyinkeenna, edbintii. Naxariistiisa ayaa xaggiisa dusha ka qaaday, Oo calooshayduna murug bay la weynayn doontaa. Dhamaanteen sidii ido baan u leexannay; oo mid waluba wuxuu leexday jidkiisii. oo Rabbigu wuxuu isaga dul saaray xumaanteenna oo dhan." (Ishacyaah 53:4-6).
Intaan Ciise dhiman ka hor, wuxuu Ilaah baryay inuu cadaadis ku galo: "Aabbow, iyaga cafi, waayo, iyagu ma oga waxa ay samaynayaan" (Luukos 23:34). Waxaan ognahay in Ilaah ka jawaabay tukashada naxariistiisa.
Wuxuu naga sii daayaa dembiga
Ciise wuxuu ku yidhi, "Ku alla kii dembiga galaa waa addoonta denbiga ... Sidaa darteed, haddii Wiilku kuu xoraynayo, waxaad xaqiiq ahaan xor u ahaan doontaa" (Yooxanaa 8:34, 36). Ciise wuxuu siiyaa kuwa isaga ka aaminsan xabsiga dembiga. Isagu wuxuu isu qaatay dembiga dunida, oo inooga dhigay aawadiis. Naxariistiisa ayaa ka xannibaya dhammaan xumaatooyinkeenna iyo Ruuxiisa Quduuska ah ee nagu jira oo nagu xoojiya inaan ka adkaado dembiga (Rooma 8:9-11). Sidaas oo kale, kii rumaysta Ciise iyo kafaaraggudkiisu waa xaq oo xaq ah.
Isagu waa adhijirka dhimashada
Ciise wuxuu ku guulaystay Shaydaanka, isaga oo ka hor istaagay, isaga oo aan isku dayin inuu jirrabo (Matayos 4:1-11; Luukos 4:1-13). Dhibaatada iyo dhibaatada, Ciise ayaa sii waday inuu naftiisa isu dhiibo oo wuxuu sii waday dembi la'aan. Ninka sharka lahu ma awoodi karo inuu wax ku yeelo. Ciise wuxuu jinniyo iyo jinniyo shaydaan saarnaa jinni. Wuxuu awood u siiyey xertiisa (Luukos 9:1). Ku alla kii aqbala kafaaraggud ayuu amar ku bixin doonaa xoogga Shayddaanka.
Wuxuu yahay xukunka dhimashada
Ciise wuxuu ku yidhi, "Anigu waxaan ahay sarakicidda iyo nolosha. Kii i rumaystaa, in kastoo uu dhinto, wuu noolaan doonaa. Kii kasta oo nool oo i rumaystaa weligii ma dhiman doono. Miyaad rumaysan tihiin?" (Yooxanaa 11:25-26).
Ciise ayaa ka guulaystay kuwii dhintay, jidh ahaan u muuqday oo xertiisii la hadlay. waxay taabteen isaga. Sidoo kale, Ciise waxa uu awood u leeyahay in uu ka dhigo kuwa raacsan isaga oo dhimanaya oo iyaga siinaya nolol weligeed ah.
Isagu waa ka bogsiiyey nacayb iyo aargoosi
Ciise wuxuu ku amray dhegaystayaashiisa: "Cadowyadiinna jeclaada, kuwa idin habaara u duceeya, kuwa idin necebna wax wanaagsan u sameeya kuwa idin neceb oo idin silciya si aad u ahaataan wiilashii Aabbihiinna jannada ku jira" (Matayos 5:44-45, Luukos 6:27-28).
Qofka kaliya ee ka dhashay ruuxa Ilaah, wuxuu u dhaafay cafiyayaashiisa oo dhan dembiyadooda oo wuxuu ku amray inay sidoo kale cafiyaan dhammaan kuwa ku dembaabay iyaga. Sababtoo ah cafiska Ciise waa jacaylkiisa weyn. Ciise wuxuu badbaadiyaa dhammaan kuwa isaga addeeca, nacaybka iyo aargoosiga.
Wiilka Maryan waa la diiday, waa la aflagaadeeyay oo wuu necbaaday dadkiisa. Laakiin inkastoo ay diideen, Ciise wuxuu iyaga u siiyay jacaylkiisa, dib-u-heshiisiinta, furashada iyo awoodda. Dhammaan kuwa denbiga ka soo jeeda oo u soo noqda waxay xaq u noqon doonaan oo helayaan nolol weligeed ah.
Akhristaha qaaliga ahow,
Nolosha Ciise ayaa kugu martiqaadaya inaad ku kalsoonaataan oo aqbalaan ereyadiisa. Waxa uu ku siin karaa awoodda Ruuxa Qudduuska ah wuxuuna ku nadiifiyaa ruuxa, nafta iyo jirka. Qalbigiinna ha adkayn, laakiin ka faa'iidaysta isaga iyo dembigooda, oo ka cararaa cadhada imanaysa. Ciise waa Bixiyahaaga, Badbaadiyaha, dhexdhexaadiyaha iyo dhexdhexaadiyaha hortiisa Ilaah hortiisa. Isagu waa noloshaada iyo damaanad qaadna badbaadadaada. Gacantaada ku sii fidi oo gacantaada fidiya si aad nimcada nimcadiisa ugu hesho nimco (Yooxanaa 1:16).
Duco mahadnaq ah
U soo duceeya: "Rabbi Ciise, waxaad tahay Badbaadiyaha dunida iyo Badbaadiyeheenna. Waxaad iga samatabbixisay cadhada Ilaah iyo xukunka. Waxaad iga badbaadisay sharaftayda iyo nafsadeyda. Xumaantayda iga xoor, oo i badbaadi noloshaada daahirsanaantaada iyo xaqnimada jannada, si aan shar u sii xoogaysto. Ii aqbal sida mid ka mida kuwa raacsan oo i tusi si aad u fahamto waxbaridaada iyo amarradaada. Xooggaaga ku adkaysta noloshayda, Oo carrabkaaga ugu sara kiciya. Aamiin."
Ma jeclaan lahayd in aad wax badan ka ogaato Ciise, ina Maryan?
Waxaan diyaar u nahay in aan kuu soo dirno lacag la'aan, markaan codsanno, Injiilka Masiixa oo ay weheliyaan qoraallo faahfaahsan.
U qaybi wacdinta Ciise ee xaafaddaada
Haddii laguu soo diray buug-yarahaan oo aad heshay xoog iyo raaxo, waxaad la wadaagtaa asxaabtaada iyo deriskaaga. Waan ku faraxsannahay inaan kuu soo dirno tiro kooban oo nuqul ah. Noo ogolow nambarka aad u kala qaybin kartid adiga oo aan dhibaato ku qabin naftaada.
Waannu ku baryaynaaye, aannu Rabbiga Ilaahiinna ah ku mahad naqno. Ha iloobin inaad qorto, si cad, cinwaankaaga oo buuxa.
Page last modified on September 19, 2018, at 09:14 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)